Ihe mere eji arụ ọrụ ọhụụ nke Twitter abụghị EGO EGO
Twitter nwere mara ọkwa usoro ohuru nke na eme ka ihe ichoro na nyocha. Nwere ike ịchọ ugbu a, egosiri gị Tweets, isiokwu, akaụntụ, onyonyo na vidiyo dị mkpa. Ndị a bụ mgbanwe:
Mperi nsụgharị: Ọ bụrụ n ’ịpịa otu okwu, Twitter ga - egosiputa ihe ga - abata n’ ajụjụ ịchọrọ.
Ntụnye metụtara: Ọ bụrụ n’ịchọ isiokwu nke ndị mmadụ na-eji ọtụtụ okwu eme, Twitter ga-enye ntụnye dị mkpa maka okwu ndị yiri ya.
Nsonaazụ nwere ezigbo aha na aha njirimara: Mgbe ịchọrọ aha dịka 'Jeremy Lin,' ị ga - ahụ nsonaazụ na-akpọ ezigbo aha onye ahụ na aha njirimara akaụntụ Twitter ha.
Nsonaazụ sitere na ndị ị na-eso: Na mgbakwunye na ịlele 'All' ma ọ bụ 'Top' Tweets maka ọchụchọ gị, ị nwekwara ike ịhụ Tweets banyere isiokwu enyere n'aka naanị ndị ị na-eso.
Mgbe m tụrụ ọrụ injinịa ahụ, anaghị m ahụ atụmatụ ọhụụ & Nchọpụta Twitter nke ọhụụ dị ka onye na-agbanwe egwuregwu maka ebumnuche abụọ:
1. Twitter Mmelite na Uche na-afụ Ọsọ
Kwa ụbọchị, enwere nde akaụntụ Twitter ọhụrụ mepụtara na 1 nde Tweets zigara! Ozi a oge niile dị oke mma, mana ọ naghị enye onwe ya nke ọma ịchọ na nchọta. Anaghị m abanye tweets maka isiokwu ụfọdụ; kama, m na-achọ ndị na-adọrọ mmasị m ga-eso.
2. Twitter Digested Mpụga nke Twitter.com
Ihe mere Twitter ji bụrụ ihe ịga nke ọma na mmalite afọ, bụ na enwere ike ịmepụta ozi ahụ, gbarie, ma kewaa kpamkpam na Twitter.com. Roblọ ọrụ a siri ike nke API nyere aka mee ka ọtụtụ uto. Dịka Twitters na-agba mbọ iweghachi folks na Twitter.com, ndị mmadụ na-enwe ntụsara ahụ ma na-ahụ tweets na nyiwe ndị ọzọ nke atọ. Maka nke a, ọtụtụ ndị ọrụ dị arọ agaghị ahụ atụmatụ Twitter na nchọta & Nchọpụta.
Otu mkpuchi, engineer na Twitter onye na-eduzi ụgwọ ahụ, Pankaj Gupta bụru ụkporo apha; ọ jụrụ onyinye sitere na Google na Facebook iji rụọ ọrụ na Twitter. Ọ maara n'ezie nke ọma iji gosi m na ezighi ezi.
Obi tọrọ gị ụtọ ịnabata onyinye si @twitter (ndo)google na @facebook, Ahụrụ m unu n'anya, mana @twitter Ebe a ka m ga-…)
Kedu ihe ị chere? Ihe ọhụrụ ndị a ọ ga - abụ ihe gbanwere egwuregwu maka twitter? Hapụ echiche na echiche gị n'okpuru.
Tags: Social Media MarketingTwitternchọpụta twitternyocha twitter
Jul 8, 2012 na 3:32 PM
Na-ekpori ndụ mgbe niile ide na ịkekọrịta gị niile. Ekelere ndị niile na-ere ahịa teknụzụ Blog!
Jul 9, 2012 na 4: 45 AM
Twitter n'onwe ya bụ onye na-agbanwe egwuregwu, anyị niile na-eji ya n'ụzọ dị iche iche ma na-anwa ịme ihe nwere ike, dịka Twitter n'onwe ha bụ. A nabatara mgbakwunye ọ bụla na nhọrọ ọchụchọ ahụhụ. Ọ dị mma na-ekwu okwu banyere isiokwu ezie na m na-anabata na, daalụ Paul
Jul 9, 2012 na 2:10 PM
@ twitter-205666332: disqus Daalụ maka okwu gị! Twitter bụ onye na-agbanwe egwuregwu; ọ bụ ihe ịtụnanya ihe mmelite agwa 140 pụtara ma mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ntanetị.
Echere m na ị ga-ahụ ọtụtụ na ndị ọzọ, Twitter na-anwa ịchụpụ arụmọrụ karịa nke atụmatụ ndị dị ugbu a, ma ọ bụghị ịmepe atụmatụ ndị ọzọ.